कसरी हेरौं आमा म तिम्रो मुख ! सन्तोष बजगाई – newslinesnepal
कसरी हेरौं आमा म तिम्रो मुख ! सन्तोष बजगाई
प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७६, शनिबार ०८:०२
आमा ! आज नेपाली हिन्दु परम्परा अनुसार तिम्रो मुख हेर्नेदिन । तर म तिम्रो मुख हेर्न त अव सक्दिन । त्यो सम्भवपनि छैन आमा । तैपनि तिम्रो झझल्को यो मनमा सधैं उस्तै रहिरहँदो रहेछ । अरुले आमालाई भेटेको मिठो खानेकुरा खुवाएको र आमासंगको तस्विर खिचेर सामाजिक सञ्जालहरु रङ्गाएका छन, तर म न त तिमीसंग भेट्न सक्छु न त तस्विर नै खिच्न सक्छु । अरुको आमासंगको तस्विर हेरेर मुटुभित्र खै कता हो कता चिसो हुन्छ अनि तिमीलाई सम्झिएर रुन विवश हुन्छु । त्यसैको परिणाम हो आज तिम्रा लागि यि शव्दहरु आमा !
हुन त म तिमीलाई अव भौतिक रुपमा भेट्न र देख्न सक्दिन तर तिमी मेरो मानसपटलमा हर समय हर बखत रहिरहने छेउ । आमा तिमी फेरी फर्केर यहाँ आउनपनि सक्दिनौ अनि म तिमीलाई भेट्न आउँभने फेरी त्यो पनि सम्भव नहोला की ! अनि कसरी भेटौ म तिमीलाई र कसरी हेरौं म तिम्रो मुख, मेरी आमा ?
आमा ! तिमीले यो धर्ति छोडेको दिन मैले आफ्नो भन्ने सबै कुरा गुमाईसकेको छु । अव मसंग न त कुनै सपना छ न त कुनै रहर । मलाई यतिमात्र थाहा छ आमा तिमीले भनेको भन्दा बाहिर केहिपनि गर्न हुँदैन गर्दिनपनि, अनि तिमीले सिकाएको बाहेक अरु कुरा मनमा लाउँदैन पनि । तिमीले ज्यादै प्रशव पीडा सहेर ४ (चार) दिनसम्म व्यथाले च्यापेर जन्माएको मलाई । त्यो मैले भुलेको छैन आमा ! पछिसम्मपनि मलाई र तिम्लाई हेर्न आउनेहरु दंग पर्थे कसरी सहेको होला त्यो व्यथा भनेर । त्यतिबेला गाउँमा अस्पताल थिएन, शहरमा भएपनी पहुँच थिएन । आफ्नो ज्यानको वाजी लगाएर त्यो पीडामा रतिभर नडराई मलाई धर्तिमा एक छोराको रुपमा जन्म दियौ । त्यसैले तिमी महान छौ आमा ! तिमी जीवित नभएपनि मेरो लागि साक्षात् देवि लक्ष्मी, दुर्गा र सरस्वती भन्दा तिमी धेरै माथि छौ ।
आमा ! मैले तिमीले देखाएको बाटो कदापी भुलेको छैन । कदापी कु बाटोमा आँखा लागेको छैन । जिन्दगीमा जे गर्छु तिमीमै सर्मपित भएर गर्न पाउँ तिम्रै खुसिमा गर्न पाउँ र गर्छुपनि । र त तिमीले माथिबाट हेरिरहेकी छेउ कतै अफ्ठ्यारोमा साथ बनेर, दुःखमा सहारा बनेर हरेक परिस्थितिमा मलाई खुसी बनाउन माथिबाट हेरिरहेकी छौ भन्ने आशा छ आमा ।
आमा ! छोरो भएर तिमीप्रति गर्नु पर्ने कतव्र्य त पुरा गर्न पाईन । दैवले त्यो हाम्रो खुसी देख्नै चाहेन । तिमीलाई हामीबाट छुटाएर लग्यो । भाईले साथ छोडेपछि तिमी मेरो बारे ज्यादै चिन्तीत थियौ । मर्ने दिन मर्नु भन्दा केहि बेर अगाडिसम्म मलाई “यस्को चिन्ता छ के गरेर खाला ?” भनेर मेरै मात्र चिन्ता लिन्थेउ । तर आमा म तिम्रो त्यहि “के गरेर खाला” भन्ने शब्दको कारण सानै उमेरमा एक परिपक्क बन्न पुगेको छु । आफ्नै खुट्टामा उभिएको छु । आफ्नै पौरख र पसिनामा रमाउन थालिसकेको छु । मात्र एउटा गुनासो छ दैवसंग मैले गरेको कुनै एउटा सानो मात्र भएपनी उपलब्धी देख्न पाएको भए तिम्रो आत्मा अझ खुसी हुन्थ्यो होला तर देख्न पाईनौ पापी दैवले त्यो दिन नआउँदै म बाट तिमीलाई खोसेर लग्यो ।
आमा ! बाँचुनजेल तिम्रै पदचाप पछ्याउन पाउँ । तिमी जस्ती महान आमाको छोरो भएर जन्मिएकोमा गर्व गर्न पाउँ । मेरो यति चाहाना छ आमा ! आमा ! संसारमा तिम्रो काँख जतिको सुरक्षीत ठाउँ कहिँ कतै भेटिएको छैन र भेटिन्नपनि होला । तिमीले जति मायापनि कसैले गर्नेछैन मलाई र मपनि तिमीलाई जस्तै विश्वास कसैलाई गर्न सक्दिन । त्यसैले आमा यो संसारमा मेरो भन्नु केवल तिमी मात्र हौ, थियौं । तिमीले पनि छोड्यौ त्यसैले मेरो आफ्नो भन्नु कोही छैन । केवल तिम्रो सम्झना र तिमीसंग खिचिएको तस्विर र तिम्ले सिकाएको शिक्षा तिमीले देखाएको बाटो र तिम्रो छोरो हुनपाउनुको सौभाग्य बाहेक अरु केहि छैन मसंग आमा ! हो म यति कुरामै खुसी छु ।
आमा ! आज आमाको मुख हेर्नेदिन तर तिम्रो मुख हेर्न सम्भव नै भएन । आमा ! म धेरै अभागी रहेछु । तिम्रो काँखमा खेल्ने उमेरमै आमा विनाको बन्न पुगेको छु । आमा विनाको जीवन कस्तो हुँदो रहेछ बारम्बार जीन्दगीले ठक्कर दिन्छ अनि जता ततै तिम्रै मात्र याद आउँछ । मुटु भित्र चिसो पस्छ । अनि यीनै शब्दहरु निस्कन्छन् मेरा मानसपटलबाट ।
आमा ! यदि भगवानका दुत साँच्चै छन् भने मेरो यी कुराहरु कुनै माध्ययमबाट तिम्रो सामु पु¥याउने छन् । यी शव्दहरु सुनेपछि म धन्य रहेछु भन्ने सम्झनु । यदि तिमीमा यो खवर पुगेन भनेपनि मैले सधै तिम्रो प्रंशसा गरेको छु तिमीलाई पुजा गरेको छु आमा !
आमा ! आज तिम्रो मुख हेर्न नपाएपनि तिम्रो तस्विर हरेर चित्त बुझाएं । मेरो भाग्य नै यस्तै रहेछ भने सम्हालिएँ । र तिमीप्रति सर्मपित हुँदै यी शब्दहरु लेखेको छु । तिमीलाई असिम माया र करोडौं सम्झना है आमा !
लेखक सन्तोष बजगाई बेलकोटगढी नगरपालिका–९, नुवाकोटका स्थायी वासिन्दा हुन् । उनि पत्रकारीता र कलाकारीता क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय छन् ।